"Barcelona Way Ka Quusatay Horyaalka LaLiga, Waxa Kaliya Oo Ay Usii Ciyaaraysaa..." - Gool24.Net
“Barcelona Way Ka Quusatay Horyaalka LaLiga, Waxa Kaliya Oo Ay Usii Ciyaaraysaa…”
Luis Suarez ayaa si cad u qirtay in Barcelona aanay wax rajo ah ka qabin horyaalka waddanka Spain ee LaLiga, isla markaana ay kulamada u hadhay u ciyaari doonaan sidii ay horyaalka ugu dhamaysan lahaayeen qaab wanaagsan.
Real Madrid ayaa horyaalka LaLiga ku guuleysan doonta Khamiista haddii ay garaacdo Villarreal, laakiin haddii Barcelona laga badiyo ama la barbarreeyo, waxay Los Blancos horyaalka hanan doontaa iyadoo xataa laga badiyey.
Suarez oo la hadlay Mundo Deportivo ayaa sheegay in Barcelona ay tahay inay nafteeda canaanato, awooddeedana ay iskugu geyn doonto tartanka Champions League, waxaanu yidhi: “Waa inaanu nafahayaga canaanano, annaga ayaa ogolaanay in horyaalku farahayaga ka baxo.
“Waxaanu ognahay in aanu annagu ogolaanay in koobku na dhaafo, mana raadinayno cudur-daar, laakiin hadda, waxay Barcelona ilaalinaysaa sharafteeda, waana inaanu sii wadno inaanu guuleysano labada ciyaarood ee hadhay, diiraddana aanu saarno Champions League oo aanu u dagaallami karayno.”
Luis Suarez waxa uu sharraxay sida ay kooxdiisu Champions League guul kaga keeni karayso, waxaanu yidhi: “Haddii aanu u ciyaarno heerka karaankayaga ah, cid walba waanu iska dhicin karaynaa, laakiin hal kulan oo aanu guul-darraysano ayaanu sababsan karnaa, sidaa darteed waa inaanu feejignaano.”
Gool-dhaliyaha reer Uruguay waxa uu usoo jeediyey ciyaartoyda Barcelona in kulamada u hadhay ay u ciyaaraan sidii kulankii Villarreal oo kale, waxaanu yidhi: “Marka aynu u dagaallamayno waxyaabo muhiim ah, sida Champions League, waa inaynu samayno sidii aynu ka yeelnay Villarreal.
“Haddii aynu 150 boqolkiiba ahaano, waynu samayn karnaa. Kulankii Villarreal farriin buu ahaa, haddii aynu doonayno inaynu samayno, waynu samayn karnaa.”